Ikhaya » izithuba » Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe » Iindaba zeTanzania zoKhenketho nezoKhenketho » Isiqithi sabakhenkethi baseZanzibar siyakwalela ukuthengiswa kotywala
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • IiNdaba zokuHamba ngeeNkcubeko • Iindaba zeNkcubeko yokuHamba • Imicimbi kaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Iindaba zeShishini lokuBuka iindwendwe • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • Uhambo lweNdawo eNtofontofo • omnye • Abantu benza iindaba • Ukulinganiswa kweeholide • Iindaba ezijongene noKhenketho • Iindaba zeTanzania zoKhenketho nezoKhenketho • Iindaba zoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziShukumayo • Iindaba zewayini
Isiqithi sabakhenkethi baseZanzibar siyakwalela ukuthengiswa kotywala
Ukurhoxiswa kwentengiso yesiselo esinxilisayo akunakuchaphazela iihotele zabakhenkethi abakumgangatho ophezulu kunye namanye amaziko akhonza iindwendwe zangaphandle
IZanzibar ikumisile ukungenisa elizweni, ukuthengisa kunye nokusela iziselo ezinxilisayo
Ukuthengiswa kweebhiya, iwayini kunye nemimoya kuya kugcinwa kuphela kwiihotele ezinceda iindwendwe zangaphandle
Uqoqosho lwaseZanzibar luxhomekeke ikakhulu kukhenketho nakurhwebo lwamanye amazwe
Isiqithi sabakhenkethi soLwandlekazi lwaseIndiya Zanzibar ukunqumamisile ukungenisa elizweni, ukuthengisa kunye nokusela iziselo ezinxilisayo ngeNyanga eNgcwele yeRamadan ngesilumkiso esiqatha kubathengisi nabathengisi botywala kwesi siqithi.
Isigqeba seBhodi yoTywala eZanzibar sithe ngesaziso sayo kule veki ukuba ukunqunyanyiswa kwentengiso yeziselo ezinxilisayo ngekhe kuchaphazele iihotele zabakhenkethi abakumgangatho ophezulu kunye nolunye ulonwabo kunye neendawo zokuhlala ezinikezela abatyeleli bamanye amazwe.
Ibhodi ithe isigqibo sokuvala iivenkile zotywala sichaziwe kwicandelo lama-25 (3) (4) elinqabela ukungeniswa nokuthengiswa kotywala ngeNyanga eNgcwele yeRamadan.
Ukuthengiswa kweebhiya, iwayini kunye nemimoya kuya kugcinwa kuphela kwiihotele nakwamanye amaziko athengisa abatyeleli bamanye amazwe abatyelela esi siqithi.
Ukuthintelwa kweziselo ezinxilisayo kunyanzelwe emva kokuba urhulumente wesiqithi eqaphele ukuba abanye abantu kunye namaziko, kubandakanya neebhari, bebewudelela lo myalelo ngokuqhubeka bethengisa kwaye besela utywala ngeNyanga eNgcwele yeRamadan ebonwa kwesi siqithi.
I-Zanzibar ubukhulu becala ngamaSilamsi kwaye bonke abahlali kulindeleke ukuba bahambisane nesiko lamaSilamsi lokuzila ukutya ukususela ekuseni ukuya ngongcwalazi ngeRamadan. Iindawo zokutyela zihlala zivaliwe emini zinabantu abambalwa ezitratweni.
Ngabantu abamalunga nesigidi esinye sezigidi esi-1.6, uqoqosho lwaseZanzibar luxhomekeke ikakhulu kukhenketho nakurhwebo lwamanye amazwe.
Ukubhankisha kwindawo yayo kuLwandlekazi lwaseIndiya, iZanzibar ngoku izibeka kwindawo yayo ukuze ikhuphisane namanye amazwe esiqithi kukhenketho, ioyile kunye nezinye izixhobo zolwandle.
Amatyathanga eehotele zamanye amazwe aseke ishishini labo kule minyaka mihlanu idlulileyo, esenza esi siqithi sibe yenye yezona ndawo zikhokelayo kutyalo-mali kwiihotele eMpuma Afrika.
Umongameli wase-Zanzibar uGqirha Hussein Mwinyi uthe urhulumente wakhe ngoku ujonge ukutsala abatyali-mali abaninzi kwiinkonzo zehotele nakwezokhenketho ngethemba lokuba le siQhingi soLwandlekazi i-Indian yindawo yokhenketho enokhuphiswano.
Isiqithi sijolise kubakhenkethi abakumgangatho ophezulu, bekhuphisana ngokusondeleyo neSeychelles, iMauritius, iComoro neMaldives.
Ukhenketho lokuhamba ngenqanawa ludibanisa isiqithi namanye amazibuko oLwandlekazi lwaseIndiya eThekwini (eMzantsi Afrika), eBeira (eMozambiki) naseMombasa kunxweme lwaseKenya.